Lozam-pifamoivoizana :: Maty tsy tra-drano ilay mpitondra môtô nidona tamin’ny taksibe - ewa.mg
Lozam-pifamoivoizana :: Maty tsy tra-drano ilay mpitondra môtô nidona tamin’ny taksibe
News - Lozam-pifamoivoizana :: Maty tsy tra-drano ilay mpitondra môtô nidona tamin’ny taksibe
Namoy ny ainy teo no ho eo ny lehilahy iray, 33 taona, nitondra môtô “scooter” tra-doza teny Ambodivoanjo, afak’omaly alina tokony tamin’ny 7 ora sy sasany. Nifandona rehefa nifanehitra tamin’ny fiara taksibe zotra 180 ny môtô nentiny. Tena mafy ny fifandonana teo amin’ ny roa tonta. “Vokatry ny fifandonana mafy dia mafy no nitarika tamin’ny fahafatesan’ilay mpitondra môtô rehefa nianjera taorian’ny loza”, araka ny voalazan’ireo polisy teny an-toerana.
“Nikasa ho any Pullman ilay taksibe amin’ny zotra 180 raha nandeha nihazo an’Analamahitsy kosa ny môtô marika Yamaha Jog Pro no nifandona teo Ambodivoanjo. Teo no ho eo ihany no nahitana fa tsy nisy aina intsony ilay lehilahy nitondra môtô. Nalefa any amin’ny tranom-patin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona ny razana”, hoy ny fanazavana avy amin’ny sampandraharaha misahana ny angombaovao sy ny fifandrasaina eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka.
“Hita ho antony mahatonga ny loza ateraky ny môtô eto an-drenivohitra, indrindra ireo scooter, ny fanovàn’ny tompony ny tanjak’ilay môtô. Betsaka ireo mpitondra môtô mampiasa arabe kanefa tsy manana fahazoan-dalana mamily, hany ka tsy mahafehy ny lalànan’ny fifamoivoizana akory izy ireny. Manginy fotsiny ny tsy fisian’ny fitaratra ahafahana mijery any aoriana ho an’ny ankamaroan’ireo môtô mifamezivezy eto an-drenivohitra. Manampy trotraka ny tsy fisian’ ny laharana amin’ireny môtô ireny, hany ka na misetrasetra aza ny mpitondra azy dia mitsoaka izy ireo sady tsy fantatra hoe iza”, hoy hatrany ny avy amin’ny Polisim-pirenena.
Na eo aza ireo rehetra ireo, tsy mikely soroka amin’ny fifehezana ireo mpitondra môtô ny avy amin’ny Polisim-pirenena. “Manao hetsika matetika izahay miady amin’ny fandikan-dalàna sy ho fisorohana ny loza. Tokony hotanterahina ny famaritana ny laharana ny môtô rehetra mba hahafahana manara-maso azy toy ny fiarakodia. Tokony heverina ihany koa ny fakàna fahazoan-dalana mitondra môtô fa tsy izay mahay mitondra dia mampiasa ny arabe”, hoy kosa ireo polisy misahana ny lozampifamoivoizina.
L’article Lozam-pifamoivoizana :: Maty tsy tra-drano ilay mpitondra môtô nidona tamin’ny taksibe est apparu en premier sur AoRaha.
Rongony 20 gony
Nifanenjika tamin’ny zandary tany Ankazobetsihay-Ampandriankilandy any Antsohihy ireo olona folo nilanja gony tsirairay, afak’omaly, tokony ho tamin’ny 4 ora hariva. Nisy tamin’ireo mpitandro filaminana no niambina ny lalana tsy maintsy lalovan’izy ireo. Nahatazana izany ireo olona dia nivily lalana ka navelan’izy ireo teo ireo gony, izay feno rongony. L’article Rongony 20 gony est apparu en premier sur AoRaha.
Ben’ny Tanàna Andriantsitohaina Naina: “Asa sy vokatra fa tsy mila adilahy politika ny vahoaka”
Hentitra ny ben’ny Tanàna Andriantsitohaina Naina, omaly, tamin’ny fotoana fananganan-tsaina natrehin’ireo mpiasan’ny CUA. “Tsy mila resaka sy adilahy politika intsony izao ny vahoaka. Mila asa sy vokatra isika ka aoka samy hifantoka tanteraka amin’ny asa sy andraikitra tandrify azy”, hoy izy tetsy amin’ny parvis Analakely.Matoky ny tsirairay ny tenany ary matoky koa fa tsy maintsy tratra ireo tanjona ho an’Antananarivo Tanànantsika. Mbola nentanina ny rehetra hanohy sy hanamafy ny ezaka rehetra mba hahatanteraka haingana ireo tetikasa rehetra.Fitokonana misy ambadika politikaNohitsiny koa anefa fa misy ireo mitsikera, ary tsy misy antony afa-tsy politika. “Henoko mihitsy aza fa misy olom-bitsy ato amin’ny kaominina, miketrika fitokonana nefa tsy manana antony mazava, fa mbola resaka politika hatrany”, hoy ihany izy. Midika izany fa efa manomboka misy vokatra ny asantsika amin’ny fanarenana sy ireo fanadihadiana samihafa mikasika ny fitantanana ka atahoran’ny mpanao politika, araka ny nambarany hatrany.Manantena vokatra ny vahoakaMomba ny tetibola kosa, nambarany fa nifantoka mafy tamin’ny tetikasa ny mpanatanteraka ka hisy ny fivorian’ny filankevitra monisipaly, ny faran’ny volana septambra izao. “Ahafahantsika mifanakalo hevitra sy mampifanaraka ny tetibola, araka ny fasahiranan’ny mponina izany. Mila mitady hevitra isika manasaraka ny hetra momba ny orinasa lehibe sy ny mponina marefo. Tsy isika no namorona ireo fepetra ireo fa adidintsika ny manatsara”, hoy ihany ny ben’ny Tanàna. Notsiahiviny hatrany fa manana programa ny mpitantana ary manana adidy sy andraikitra manoloana ny mponin’Antananarivo Renivohitra. “Miandry sy manantena vokatra avy amintsika izy ireo”, hoy ihany izy.Synèse R.L’article Ben’ny Tanàna Andriantsitohaina Naina: “Asa sy vokatra fa tsy mila adilahy politika ny vahoaka” a été récupéré chez Newsmada.
Sarona, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo, ny vola sandoka mitentina dimy alina ariary teny amin’ity lehilahy iray. Tamin’ny fanadihadiana no nahafantarana fa saika nakan’io lehilahy io mpivarotena sy hanofana trano ireo vola sandoka ireo no izao tratra izao. Natolotra ny Fampanoavana izy ka naiditra am-ponja vonjimaika avy eo. L’article Vola sandoka est apparu en premier sur AoRaha.
Tsy vao izao! Efa hatry ny ela ny nahahenoam-baovao ny kolikoly ao amin’ny foibe mpanome laharana fiarakodia (Cim) Ambohidahy, amin’ny fikarakarana fahazoan-dalana mitondra fiarakodia, indrindra ny fahazoana ny ”permis biometrique”. Nisy ireo voarohirohy nosamborina, ny taona 2017, saingy tsy mbola foana izany satria nitohy.Araka ny fanadihadiana natao, nisy nampandre ny Bianco fa misy manamboninahitra iray ao amin’ny toby Capsat Soanierana, sy ny vadiny, ahina ho manao ”permis” hosoka, fitondrana fiara ho an’ny miramila any an-tranony eny Itaosy, ka hovaina ho ”permis biométrique” eny amin’ny foibe Cim Ambohidahy. Fantatra taorian’ny famotorana ny mety hisian’ny tambajotra amin’izany, ary anisany ny ao amin’ny foibe Cim Ambohidahy. Voalaza fa anisan’ny manao kolikoly koa izy ireo amin’ny famindrana ny fitompoana fiarakodia sy ny fahazoana ”permis”.Voarohirohy ny olona 18 Araka ny voalaza etsy ambony, maro ny fitarainana azon’ny Bianco mikasika ny kolikoly ao amin’ny Cim Ambohidahy. Anisan’izany ny nataon’ny fikambanana fiarahamonim-pirenena Rohy, ny taona 2017, nahatrarana olona roa tompon’andraikitra tao, ka nampidirina vonjimaika am-ponja. Misy koa ny raharaha hafa amin’ny kolikoly, ny fanaovana taratasy hosoka, maha voarohirohy olona miisa 18, ka anisan’izany ny lehiben’ny Cim, ilay manambonihaitra ao amn’ny Capsat sy ny vadiny, ary olon-kafa miisa 15.Taorian’ny fiatrehana ny fampanoavana, ny 13 avrily teo, naiditra vonjimaika am-ponja ny olona telo, mpanera. Arahi-maso ara-pitsarana kosa ny lehiben’ny Cim Ambohidahy sy ny mpitambola ao amin’ity foibe ity.RandriaL’article ”Permis biométrique” hosoka: rava ny tambajotra mpanao kolikoly, arahi-maso akaiky ny lehiben’ny Cim a été récupéré chez Newsmada.
Filohan’ny FJKM: “Ilaina ny kristianina mahatoky”
Noraisin’ny oniversiten’i Toliara ny zaikabe fahefatry ny APU, taorian’ny tany Toamasina ka tonga nanokatra izany tamin’ny fomba ofisialy ny filohan’ny FFPM, ny pasitora Irako Andriamahazosoa Ammi. Marihina fa filoha nasionalin’ny FJKM sady filohan’ny FFKM ity raiamandreny ity, amin’izao fotoana izao. « Kristianina mahatoky, mahazo antoka ny famonjena ». Io andinin-tsoratra masina, nalaina tao amin’ny Apokalyspy toko faharoa andininy fa folo tapany b io, ny fanevan’ity zaikabe ity.Nifototra amin’ny lohahevitra telo ny fampianarana nataony: mijoro ho mahatoky, mijoro hatramin’ny fahafatesana, mijoro ho mpandesy. Tonga nandray anjara tamin’izao zaikabe izao ny avy amin’ny sampana APU valo manerana ny Nosy. Eny Maninday no nanatanterahana ny fotoana rehetra ka mandritra ny hateloana ny handraisana fampianarana maro, ankoatra ny antsam-piderana isaky ny alina. Hofaranana amin’ny fitsangantsangana any Ifaty kosa ny zaikabe, amin’ny andro fahefatra.CMS L’article Filohan’ny FJKM: “Ilaina ny kristianina mahatoky” a été récupéré chez Newsmada.
Olona roa ihany ny mitondra tsy tapaka ny « bambou » na ny volobe fanaovana valiha eto an-dRenivohitra. Na mbola tsy maro mpitady loatra aza ito zavamaneno malagasy ito, efa tsapan’ny ankamaroan’ny mpandrafitra valiha fa tsy maharaka ny filan-dry zareo ny tolotra avy any amin’ireo mpamatsy « bambou ». « Tsy tonga amin’ny fotoana mahamaro ny mpanjifa izy ireny, hany ka voatery mihantona maharitraritra ny famaliana ny filan’ny mpampiasa sy mpividy valiha », hoy ny mpandrafitra valiha iray. Anisan’ny olana iray mahatonga izany ny fakàna ireny “bamboo” na volobe ireny. Tany ambadiky ny 20 taona tany ho any, mbola tsy lasa lavitra ny toerana anirian’ny volobe. Ankehitriny, efa tafiditra anaty ala somary lavitry ny tanana vao mahita, raha ny fanazavan’ireo mpaka volobe. Ankoatra izay, manomboka sarotsarotra ihany koa ny mahita ireo volobe lava sy ranjanana. Somary mihena kokoa, raha oharina tany ambadiky ny 15 taona lasa, ny kalitaon’ny volobe fanaovana valiha. Nambaran’ireo mpanao asa tanana anefa fa « na izany aza ny olana mianjady amin’ny mpanao valiha, miezaka ny hitana ny hatsaran’ny valiha malagasy hatrany izahay satria anisan’ny zavakanto mampiavaka an’i Madagasikara sy ny Malagasy amin’ny hafa izy io sy ny zava-bita aminy ». Anisan’ny mampitombo tsikelikely ny fitadiavan’ny olona ny valiha kosa ny fiverenan’ny Malagasy tsikelikely amin’ny fitiavana ny kolontsainy. Raha ry zareo vahiny no mpividy valiha Malagasy, 5 taona lasa izay, manomboka mitady io zavamaneno io ihany koa ny Malagasy ankehitriny. HaRy RazafindrakotoL’article Asa tanana: misedra olana ny mpanao valiha a été récupéré chez Newsmada.
Hatramin’izay, saika mampiaka-peo hatrany ny hoe mpanohitra ny amin’ny fananan-jo hiteny, haneho hevitra, hamory vahoaka. Voalaza fa zo fototra izany, nefa mitaky adidy aman’andraikitra ihany koa. Tena mba atao sy vitan’izy ireo ve izay? Anisan’izany, ohatra, ny fitaizana ny mpikambana ao aminy, raha misy: be ny tsy manana mpikambana amin’ny antoko misy azy akory hatrany ifotony.Eo koa ny fandraisana anjara isaky ny fifidianana fa tsy mikisina manohana izay matanjaka hahazoan-toerana: rehefa tsy mahazo, miverina ho mpanohitra. Miara-dalana amin’izany ny fiomanana handray fahefam-panjakana amina foto-kevitra sy fandaharanasa ary paikady fanatanterahana mazava, ny fandresen-dahatra ny olom-pirenena amin’izany handatsa-bato ho an’ny tena amin’ny fifidianana manaraka…Atao sy vitan’izy ireo ve izany, raha tsy hilaza afa-tsy izay? Mampiaka-peo lava amin’ny hoe fananan-jo haneho hevitra sy hihetsika. Toy ny manana olona maro iny ao an-damosina raha sakantsakanana amin’ny fanakorontanana. Nony avela malalaka, zara raha mahajoro sy maharitra amin’izay lazainy sy ataony. Matoa nahomby ny hoe hetsiky ny vahoaka, mby amin’izay tsy zakany… hararaotin’ny sasany.Faly mamerina izay mahazatra hoe mahomby? Fanakorontanana, fandravana… rehefa tsy mahaovoka amin’ny hoe fiaraha-mitantana. Tsy misy antony anaovana fifidianana, raha tsy avela hamita ny fe-potoam-piasan’ny mpitondra. Raha tsy amin’izay tsy nifanarahana amin’ny tsy famitana izay nampanantenaina, sanatria, ka tsy zakan’ny vahoaka intsony: iandrasany ny farany, na ihetsehany avy hatrany.Izany rehetra izany no anisan’ny mankaloiloy ny maro amin’ny fomba fanaovana politika? Tsy mianga amin’izay tena hetaheta ifotony fa izay hahazoan-toerana fotsiny, anaovana ny fahasarihanam-bahoaka ho fitaovana politika enti-miady sy mitady. Mbola mandaitra sy mahomby ve izany, raha tsy mahavita izay adidy aman’andraikiny ny mpanohitra amin’ny hoe zo ananany isaky ny mihetsika?Rafaly Nd. L’article Fananan-jo… maharaikitra adidy a été récupéré chez Newsmada.